I-Geography Timeline: 13 Amaxesha atshintshe iMida yase-US
Imbali yoLwandiso lwe-US kunye noTshintsho lweMida kusukela ngo-1776
I-United States yaseMelika yasungulwa ngo-1776 ngaselunxwemeni lwasempuma yeMntla Melika, yadibana phakathi kweBritani Canada kunye neSpeyin yaseMexico. Ilizwe lasekuqaleni lalinamacandelo alishumi elinesithathu kunye nensimu eyongezwa entshonalanga kuMlambo waseMississippi. Ukususela ngo-1776, iintlobo ezininzi zeentengo, ukuthenga, iimfazwe kunye neZenzo zeCongress ziye zandisa intsimi yase-United States kwizinto esiziyo namhlanje.
I-Senate yase-United States (indlu ephezulu yeCongress) iyavuma izivumelwano phakathi kwe-United States namanye amazwe.
Nangona kunjalo, utshintsho lwemida lwamazwe aphantsi kwemida yomhlaba wonke ludinga imvume yowiso-mthetho kaRhulumente kweso sizwe. Utshintsho lwemida phakathi kwamazwe lufuna imvume yowiso-mthetho welizwe ngalinye kunye nokuvunyelwa kweCongress. INkundla ePhakamileyo yase-US ibeka iingxabano zemida phakathi kwamazwe.
Phakathi kuka- 1782 no- 1783 , izivumelwano kunye ne-United Kingdom zenza i-US njengelizwe elizimeleyo kwaye imisa umda we-United States njengokuba iboshwe ngasenyakatho yiCanada, ngasezantsi ngeSpain Florida, ngasentshonalanga nguMlambo wase-Mississippi, kwaye empuma nge-Atlantic Ocean.
Inkulungwane ye-19 yayiyithuba elibaluleke kakhulu ekunyuseni kwe-United States, kubulela inxalenye yokwamukelwa ngokubanzi kwimbono yegama elibonakalisiweyo , ukuba yayiyimfuno ekhethekileyo yaseMelika, ukunikezelwa nguThixo ukunyuka ngasentshonalanga.
Olu lwandiso luqalise ngokuthengwa kweLouanaana elandeleleneyo ngokukhethekileyo ngo- 1803, okwandisa umda osentshonalanga we-United States kwiiRoyy Mountains, uhlala kwindawo yokuhambisa amanzi eMlambo iMississippi.
I-Louisiana Purchase iphindwe kabini kwintsimi yase-United States.
Ngomnyaka we- 1818, iindibano kunye ne-United Kingdom zandise le ntsimi entsha ngakumbi, imisa umda wasentla weLouanaana Purchase kuma-degrees angama-49 ngasentla.
Kunyaka nje kamva, ngowe- 1819, iFlorida yachithwa eMelika kwaye yathengwa eSpeyin.
Ngelo xesha, iUnited States yayandiselela ngasentla. Ngowe- 1820 , uMaine waba ngumbuso, oqoshiwe kwilizwe laseMassachusetts. Umda osenyakatho waseMaine wawuphikisana phakathi kwe-US neKhanada ngoko uKumkani waseNetherlands walethwa njengombambano waza wabeka ingxabano ngo-1829. Nangona kunjalo, uMaine wenqabile le ntsebenzo kwaye ekubeni iKomfa idinga imvume yowiso-mthetho womda kumda utshintsho, i-Senate ayikwazanga ukuvuma isivumelwano malunga nomda. Ekugqibeleni, ngo-1842 umnqophiso wasungula umngcele waseMaine-Canada namhlanje nangona wawunike uMaine ngensimu engaphantsi kwesicwangciso sikaKumkani.
IRiphabhlikhi emele yaseTexas yayisihlanganiswe e-United States ngo- 1845 . Intsimi yaseTexas yenyuka enyakatho ukuya kuma-42 degrees ngasentla (ukuya kwi-Wyoming yamanje) ngenxa yesivumelwano semfihlo phakathi kweMexico neTexas.
Ngowe- 1846, i- Oregon Territory yachithwa e-US evela eBrithani emva kwebango elibambene ne-1818 kwintsimi, eyabangela ukuba inqaku elithi " Amashumi amahlanu anesine okanye alwa Namabala! ". ISivumelwano saseOregon sakha umda kwi-49 degrees ngasentla.
Ukulandela iMfazwe yaseMexico phakathi kwe-US kunye neMexico, amazwe asayinwe isivumelwano se- 1848 saseGuadalupe, okubangelwa ukuthengwa kweArizona, eCalifornia, Nevada, eNew Mexico, eTexas, nase-Utah nakwintshona yeColorado.
Ngokuthengwa kwe-Gadsden ka- 1853 , ukuthengwa komhlaba okubangele indawo yamazwe angama-48 anamandla namhlanje agqityiwe. I-Southern Arizona kunye ne-New Melika yaseMexico zathengwa ngeedola ezili-10 kwaye zibizwa ngokuba nguNgqongqoshe waseMexico eMexico, uJames Gadsden.
Xa iVirginia yagqiba ekubeni iphume kwiNyunyana ekuqaleni kweMfazwe yoLuntu ( 1861-1865 ), iinqununu zaseNtshona-vali zaseVirginia zavotela ngokulandelana kunye kwaye zagqiba ekubeni zenze imeko yazo. IWestinia yaseVestinia yasungulwa ngoncedo oluvela kwiCongress, eyagunyazisiweyo kwimeko entsha ngomhla kaDisemba 31, 1862 kunye ne-West Virginia yavunyelwa kwi-Union ngomhla ka-Juni 19, 1863 . IWestinia yaseVestinia yayiza kuthiwa yiKanawha.
Ngo- 1867 , i-Alaska yathengwa esuka eRashiya i-$ 7.2 yezigidi kwigolide. Abanye bacinga ukuba le ngcamango yayiyihlazo kwaye ukuthengwa kwaziwa ngokuba nguSeward's Folly, emva koNobhala kaRhulumente uWilliam Henry Seward.
Umda phakathi kweRashiya neKhanada wasungulwa ngumnqophiso ngo- 1825 .
Ngowe- 1898, iHawaii yahlonyelwa e-United States.
Ngowe- 1925 , umnqophiso wokugqibela kunye neUnited Kingdom wawucacisa umda ngokusebenzisa iLake le-Woods (eMinnesota), obangela ukutshintshwa kwamahektare ambalwa phakathi kwamazwe amabini.
Iinjongo zoPhuhliso lweMillennium
Inkcitho kunye nePeriphery
Ukulungiselela i-GRE ehlaziyiweyo kwiNyanga enye
Ukufundisa igrammar kwisicwangciso se-ESL / EFL
Iindlela ezisisiseko zokuhamba